Soomaaliya, 11 December 2018
Talaado 11 December 2018
Wararkii ugu dambeeyey mooshinka Farmaajo
Magaalada Muqdisho waxaa weli ka oogan murankii ka dhashay mooshin xil ka qaadis oo ay qaar ka mid ah xildhbaanada baarlamanka Soomaaliya ka gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Dad ku dhintay dibadbax ka dhacay Baydhabo
Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in dad ay ku dhinteen iska horimaad dhex maray ciidamada booliska iyo dad dibad bax ay ku taageerayaan gudoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya Maxamed Mursal ka oogayay magaalada.
Muxuu ku dhigan yahay mooshinka Farmaajo?
Mooshinka laga gudbiyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa mar kale soo cusbooneysiiyey dhaqankii siyaasadda Soomaaliya.
Xiisad siyaasadeed oo ka taagan Muqdisho
Xildhibaanno ka tirsan baarlamanka Soomaaliya ayaa mooshin xil ka qaadis madaxweyne u gudbiyay gudoomiyaha baarlamanka, kaasi oo isna uu ka gufdoomay.
Madaxweyne Farmaajo oo Moshin laga Gudbiyay
Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay inay guddoonka u gudbiyeen mooshin ka dhan ah madaxweynaha Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen inuu ka kacay qiyaano-qaran, isla markaana uu ku xadgudbay dasuurka qaranka.
Howlgal Lagu Dilay Maleeshiyada al-Sbabaab
Lix ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu dilay hawlgal xalay ka dhacay degaanka Basra oo u dhow magaalada BALCAD, sida ay sheegtay hay’adda nabadsugidda Soomaaliya.
Madaxda Sare ee Gaashaandhigga Somalia oo Kulmay
Kulanka ayaa yimid ka dib dilkii dhowaan loo geestay laba Generaal oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka ahaana taliyihii iyo abaanduulihii 12 April Jenerala Cuamr Dheere iyo Jeneraal Cabdi Cali Jamaame.
Heshii laga Gaaray Colaadda Taleex
Colaad in muddo ah ka jirtay Degmada Taleex ee Gobolka sool ayaa shalay la soo afjaray. Nabadaynta ayaa la sheegay inay hoggaaminayeen odayaasha dhaqanka, kuwaaso oo dhinacyada colaaddu dhexmartay ku dhexdhexaadiyey inay nabad qaataan, isla markaana mag laga bixiyo dadkii la kala dilay.
Carwo Ganacsi oo laga Furay Hargeysa
Carwadan ganacsi oo lagu soo bandhigay waxsoosaarka dalka gudihiisa, ganacsiyada dibedda laga keeno iyo sidoo kale halabuurka ganacsi ee kale ayaa maanta laga furay Hargeysa.